31 Ahụhụ ga-adịrị ndị na-agbada Ijipt ịga chọọ enyemaka,+ ndị na-adabere n’ịnyịnya efu,+ ndị na-atụkwasị obi n’ụgbọ ịnyịnya agha+ n’ihi na ha dị ọtụtụ, ndị na-atụkwasịkwa obi n’ịnyịnya agha n’ihi na ha dị ike nke ukwuu, ma ha elekwasịghị Onye Nsọ Izrel anya, ha achọghịkwa Jehova.+ 2 Ọ makwa ihe,+ ọ ga-eme ka e nwee ọdachi,+ ọ kagbubeghị ihe o kwuru;+ ọ ga-ebili megide ụlọ nke ndị na-eme ihe ọjọọ,+ megidekwa enyemaka nke ndị na-eme ajọ ihe na-achọ.+ 3 Otú ọ dị, ndị Ijipt bụ mmadụ,+ ha abụghị Chineke; ịnyịnya ha bụkwa anụ ahụ́,+ ha abụghị mmụọ. Jehova ga-esetịkwa aka ya, onye na-enye aka ga-asụ ngọngọ, onye a na-enyere aka ga-adakwa,+ ha niile ga-ala n’iyi n’otu mgbe. 4 N’ihi na nke a bụ ihe Jehova gwara m: “Dị nnọọ ka ọdụm, bụ́ nwa ọdụm tojuru etoju,+ si aba mba mgbe ọ nọ n’elu anụ ọ dọgburu, mgbe a kpọkọtara ndị niile na-azụ atụrụ ka ha wakpo ya, ọ gaghị atụ ụjọ n’agbanyeghị iti mkpu ha, ọ gaghịkwa agba ọsọ n’agbanyeghị mkpọtụ ha na-eme; otú ahụ ka Jehova nke ụsụụ ndị agha ga-agbadata ka o buo agha n’ihi Ugwu Zayọn nakwa n’ihi ugwu nta ya.+ 5 Dị ka nnụnụ nke na-efegharị si echebe ụmụ ya, otú ahụ ka Jehova nke ụsụụ ndị agha ga-echebe Jeruselem.+ Ọ ga-echebe ya, napụtakwa ya.+ Ọ ga-emere ya ebere, ọ ga-emekwa ka ọ lanahụ.” 6 “Lọghachikwutenụ+ Onye ahụ unu nupụụrụ isi nke ukwuu, unu ụmụ Izrel.+ 7 N’ihi na n’ụbọchị ahụ, onye ọ bụla n’ime ha ga-ajụ chi ya na-abaghị n’ihe, ndị e ji ọlaọcha mee, na chi ya na-abaghị uru, ndị e ji ọlaedo mee,+ ndị unu ji aka unu meere onwe unu ka ha bụrụ mmehie.+ 8 A ga-eji mma agha, nke na-abụghị mma agha mmadụ, gbuo ndị Asiria; mma agha, nke na-abụghịkwa mma agha mmadụ, ga-eripịa ha.+ Ha ga-agba ọsọ n’ihi mma agha. Ụmụ okorobịa ha ga na-arụkwa ọrụ mmanye. 9 Ụjọ ga-eme ka nkume ha nke dị elu ghara ịdịkwa. Ndị isi ha ga-atụkwa ụjọ n’ihi ihe mgbaàmà ahụ,”+ ka Jehova kwuru, bụ́ onye ìhè ya dị na Zayọn, onye ekwú ọkụ ya+ dịkwa na Jeruselem.